I-Belgium Business Ucingo Uhlu | Inombolo Yeselula | Database lakamuva Lokuposa
Uhla lwebhizinisi laseBelgium
Database lakamuva Lokuposa » Uhla lwebhizinisi laseBelgium
I-Belgium Business Ucingo Izinombolo
Uhlu lwezinombolo zebhizinisi laseBelgium lokumaketha kwedijithali kanye nomkhankaso wokubiza amakhaza. Indlela engcono yokumisa izingcingo zokuthola inkathazo ukubhalisa inombolo yakho ngensizakalo Yokukhetha Izingcingo Bayokufaka ohlwini lwabo lwezinombolo ezingafuni ukwamukela izingcingo zokuthengisa kanye nokuthengisa. Uma umakhalekhukhwini wakho ungekho kulolo hlu, ungathola ileveli ye-SAR yefoni yakho ethize ngokubheka i-database ye-FCC eku-inthanethi efakwe kuhlu: Izizinda zolwazi ze-Stolen zisiza amaphoyisa, amabhizinisi alwa nemaki engemthetho.
Njengoba ukusetshenziswa komakhalekhukhwini kukhuphuka ukumiselela izingcingo eziningi zasendlini, kubaluleke kakhulu kunangaphambili ukufaka izinombolo zamaselula kuzinhlelo zakho zokusebenza zokwengeza izingcingo nokuqinisekisa. Thenga uhlu lwefoni yebhizinisi laseBelgium ukumaketha nokukhangisa okunikezwayo kwebhizinisi lakho.
Thenga Izinombolo Zefoni Yebhizinisi laseBelgium
Inani Lamarekhodi: 37500
IBELGIUM IBHODI IZIMPAHLA ZOKUGCINA
Uhlu lwefoni yebhizinisi le-BELGIUM, luqoqwe ngokunembile oluqukethe imininingwane ethize ebuyekeziwe yabemukeli, ngenombolo yabo yocingo ye-sms, izinombolo zocingo, amagama webhizinisi, amadolobha namakhodi we-zip. Le nombolo yefoni yebhizinisi ihla kuhlu lwesigcini esiqondisa kubemukeli abalungile njengoba kudingeka kuhanjwa ngocingo.
Ukuthenga uhlu lwezinombolo zocingo lwaseBelgium kusuka eDathabheki Yokuposa Yama-imeyli, kuyindlela ewusizo kakhulu yebhizinisi, engakunika inombolo yefoni okuholela ukukhuthaza umkhankaso wakho wokuthumela izingcingo, ukubiza nokubanda kanye nemikhankaso ye-sms. Uma udinga ukusebenzisa izingcingo ngempumelelo futhi kusebenza kahle ukuthi ngabe usetha ama-aphoyintimenti, uhlinzeka ngemininingwane, noma uthengisa ngqo ngocingo unamakhasimende okuqondisa okulungile kakhulu.
Uhlu lwezincwadi zebhizinisi laseBelgium liqukethe amarekhodi ahlanganisiwe angama-37,500 900 ahlanganiswe ocingo lwebhizinisi oluholela ku- $ XNUMX, inkokhelo yesikhathi esithile kanye nesoftware engalandelwa ngokushesha engaba uhlobo lwefayela le-Excel CSV.
Database Lokugcina Lokuposa lizokunikeza konke okudingayo ngohlu lwefoni yebhizinisi. Uhlu lwezinombolo zebhizinisi laseBelgium lunedatha eyi-90% ecwaninga okwenziwa ngabasebenzi bethu ukwenza labo obukelayo batholakale kalula, bazoxhumana kalula futhi bangathengisa kalula. Ukwenza ibhizinisi lakho likwazi ukutheleleka ngokweqile, ukugcwala kanye nendlela enhle yokwenza ibhizinisi lakho lithuthuke.
I-Belgium Business Business Umbuzo & Impendulo